Fanontaniana 5 hapetraka alohan'ny hisafidianana ny orinasa farany
Ny dingana vitsivitsy amin'ny fizotran'ny milina dia manan-danja toy ny fisafidianana ny safidy fitaovana tsara indrindra ho an'ny asanao. Ny manasarotra ny fizotrany dia ny zava-misy fa ny fitaovana tsirairay avy dia samy manana ny geometry manokana misy azy avy, ary ny vokariny dia ny vokatr'ilay anjaranao. Manoro hevitra anao izahay hanontany tena anao fanontaniana lehibe 5 alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fisafidianana ny fitaovana. Amin'izany dia azonao antoka fa manao ny fahazotoanao misafidy ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny fampiharana ianao. Ny fandaniana fotoana fanampiny hahazoana antoka fa misafidy ny fitaovana tsara indrindra ianao dia hampihena ny fotoana tsingerina, hampitombo ny fiainam-pitaovana, ary hamokatra vokatra avo lenta kokoa.
Inona avy ireo fitaovana entiko manapaka?
Ny fahalalana ny fitaovana iarahanao miasa sy ny fananany dia hanampy hampihena be ny safidinao farany. Ny fitaovana tsirairay dia manana karazana mekanika miavaka manome azy toetra miavaka rehefa milina. Ohatra, ny fitaovana plastika dia mitaky paikady milina hafa - ary haometry fitaovana hafa - tsy mila vy. Ny fisafidianana fitaovana miaraka amin'ny haitao namboarina mifanaraka amin'ireo toetra mampiavaka azy ireo dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana sy ny faharetana.
Harvey Tool dia mitahiry karazana mina faran'izay avo lenta. Ny fanolorana azy dia misy fitaovana havaozina ho an'ny vy vy mihamafy, firaka hafakely, vy vy antonony, vy fanodinana milina maimaim-poana, firaka aliminioma, akora mahery vaika, plastika ary fitambarana. Raha ilay fitaovana nofidinao dia hampiasaina amin'ny karazana fitaovana tokana ihany, ny misafidy milina famaranana manokana no mety ho filanao tsara indrindra. Ireo fitaovana manokana ara-nofo ireo dia manome geometry sy palitao mifanaraka indrindra mifanaraka amin'ny toetranao manokana. Fa raha mikendry ny fanamorana milina ianao amin'ny alàlan'ny fitaovana marobe, ny sehatry ny famaranana kely harvey Tool dia toerana tsara hanombohana.
Ny Helical Solutions dia manome ihany koa ny vokatra isan-karazany natokana ho an'ny fitaovana manokana, ao anatin'izany ny Aluminium Alloys & Non-Ferrous Materials; ary ny vy, ny metaly avo lenta ary ny titane. Ny fizarana tsirairay dia misy isa maro isan-karazany - manomboka amin'ny milina famaranana flute 2 ka hatramin'ny Multi-Flute Finishers, ary maro ny mombamomba azy, ny safidy mifono ary ny géometry.
Operations iza avy no ho ataoko?
Ny fangatahana dia mety mitaky fandidiana iray na maro. Ny fiasan'ny milina mahazatra dia misy:
iza na iza
Fitrandrahana avo lenta
Amin'ny fahafantarana ireo asa ilaina amin'ny asa, ny masininina dia hanana fahatakarana tsara kokoa momba ny fitaovana ilaina. Ohatra, raha toa ka misy ny fomban-drazana mahazatra sy ny filokana, ny fisafidianana ny Helical Solutions Chipbreaker Rougher mba hamoahana fitaovana betsaka kokoa dia safidy tsara kokoa noho ny Finisher misy sodina maro.
Firy ny sodina ilaiko?
Ny iray amin'ireo fiheverana lehibe indrindra amin'ny fisafidianana ny fikosoham-bary dia ny famaritana ny isan'ny sodina. Na ny fitaovana na ny fampiharana dia mitana andraikitra lehibe amin'ity fanapahan-kevitra ity.
Rehefa miasa amin'ny fitaovana tsy Ferrous, ny safidy mahazatra indrindra dia ny fitaovana 2 na 3-flute. Araka ny fomba nentim-paharazana, ny safidy 2-flute no safidy tadiavina satria mamela ny fahazoana moka tsara indrindra. Na izany aza, ny safidy 3-flute dia nanaporofo ny fahombiazany tamin'ny famitana sy ny fampiharana ny High Efficiency Milling, satria ny isan'ny flute ambony dia hanana teboka fifandraisana bebe kokoa amin'ilay fitaovana.
Ny fitaovana Ferrous dia azo ampiasaina amin'ny milina amin'ny alàlan'ny 3 na 14-flutes, arakaraka ny fandidiana natao.
Firaisana nentim-paharazana: Rehefa misavoritaka dia tsy maintsy mamakivaky lohasaha sodin'ilay fitaovana handeha hamindra toerana ireo fitaovana marobe. Noho io antony io dia manome soso-kevitra ny sodina marobe - ary ny lohasaha sodina lehibe kokoa. Fitaovana misy sodina 3, 4 na 5 dia matetika ampiasaina amin'ny fikorontanana nentim-paharazana.
Slotting: Safidy 4-flute no safidy tsara indrindra, satria ny isan'ny sodina ambany dia miteraka lohasaha sodina lehibe kokoa ary famindrana puce mahomby kokoa.
vita: Rehefa vita amina fitaovana ferrous dia asaina manisa fantsom-pandrefesana avo indrindra ho an'ny vokatra tsara indrindra. Ny Finishing End Mills dia misy na aiza na aiza manomboka amin'ny sodina 5 ka hatramin'ny 14. Ny fitaovana mety dia miankina amin'ny ohatrinona ny fitaovana sisa tavela amin'ny ampahany.
Fitrandrahana avo lenta: Ny HEM dia fomba iray mikotrana izay mety hahomby tokoa ary miteraka fitsitsiana fotoana lehibe ho an'ireo magazay fivarotana. Rehefa milina fantsom-pitaovana HEM dia safidio ny sodina 5 ka hatramin'ny 7.
Inona avy ireo refy manokana ilaina?
Rehefa avy nanondro ny fitaovana iasanao ianao, ny fandidiana izay hatao, ary ny isan'ny sodina ilaina, ny dingana manaraka dia manome antoka fa ny safidinao farany dia manana refy marina amin'ilay asa. Ny ohatra iray amin'ny fiheverana lehibe dia misy ny savaivon'ny fanapahana, ny halavan'ny fahatapahana, ny ahatongavany ary ny mombamomba azy.
Ny savaivony fanapahana dia ny refy izay hamaritra ny sakan'ny slot, noforonin'ny sisin'ny fanapahana rehefa mihodina izy. Ny fisafidianana ny savaivom-bokatra izay ny habeny tsy mety - na lehibe loatra na kely - dia mety hitarika amin'ny asa tsy vita tsara na ampahany farany tsy famaritana. Ohatra, ny savaivonin'ny fanapahana kely kokoa dia manome fahazavana bebe kokoa ao anaty paosy tery, raha fitaovana lehibe kokoa kosa no manome henjana ny asa avo lenta.
Ny halavan'ny Cut & Reach
Ny halavan'ny fanapahana ilaina amin'ny milina famaranana rehetra dia tokony holazaina amin'ny halavan'ny fifandraisana lava indrindra mandritra ny hetsika. Izany dia tokony ho raha mbola ilaina, ary tsy intsony. Ny fisafidianana ny fitaovana fohy indrindra azo atao dia hiteraka fihenan'ny overhang, fananganana hentitra kokoa ary hampihenana ny resaka. Toy ny fitsipiky ny ankihibe, raha misy fangatahana fangatahana fanapahana amin'ny halalin'izay mihoatra ny 5x ny savaivon'ny fitaovana dia mety ho tsara kokoa ny hijerena ireo safidy azo tratrarina hatak'andro ho solon'ny halavany lava.
Mombamomba ny fitaovana
Ny fomba fanao mahazatra mahazatra indrindra ho an'ny famaranana dia ny kianja, ny zoro ary ny baolina. Ny mombamomba ny kianja amin'ny fikosoham-bary farany dia misy sodina misy zoro maranitra izay efamira amin'ny 90 °. Ny mombamomba ny radius zoro dia manolo ny zoro maranitra marefo miaraka amin'ny radius, manampy tanjaka ary manampy amin'ny fisorohana ny fikikisana mandritra ny fotoana maharitra ny fiainam-pitaovana. Ary farany, ny mombamomba ny baolina dia manasongadina sodina tsy misy fisaka ambany, ary voahodidin'ny farany mamorona "orona baolina" eo an-tendron'ilay fitaovana. Io no fomba farany fanosehana mahery indrindra. Ny sisin'ny fanapahana boribory feno dia tsy misy zorony, manala ny teboka tsy fahombiazana azo inoana indrindra amin'ilay fitaovana, mifanohitra amin'ny sisiny maranitra eo amin'ny famaranana ny mombamomba azy. Ny mombamomba ny famaranana dia matetika no voafantina amin'ny alàlan'ny fepetra takiana, toy ny zorony toradroa ao anaty paosy, mila milina famaranana. Rehefa azo atao, safidio fitaovana iray misy fantsom-pahazavana lehibe indrindra azo ekena araka ny fitakian'ny anjaranao. Manoro hevitra radio zoro izahay isaky ny mamela anao ny fampiharana anao. Raha takiana tanteraka ny zorony efa-joro, dia hevero ny fanodinana azy amin'ny fitaovana radius zoro ary farano amin'ny fitaovana profil square.
Tokony hampiasa fitaovana mifono ve aho?
Rehefa ampiasaina amin'ny fampiharana marina, ny fitaovana mifono dia hanampy amin'ny fampivoarana ny fahombiazan'ny fanomezana ireto tombony manaraka ireto:
Parameter mihazakazaka misimisy kokoa
Fanatsarana ny sifotra nohatsaraina